Ho hentitra tanteraka ny fitandroana ny filaminana. Mahatratra 4,4 miliara ariary ny tetibolan’ny fitandroana ny filaminana mandritra ny fihaonana an-tampony faha-16 an’ny Frankofonia atao eto Antananarivo. Mpitandro ny filaminana 7 000 no hohetsehina. Avy ao amin’ny EMMOFAR Antananarivo ny 4 000 ary nohafarana avy any amin’ny faritra ny ambiny. Fiara mifono vy 30 no havoaka hipetraka amina toerana maro samihafa eto Antananarivo sy ny manodidina. Ho hentitra dia hentitra ny fitandroana ny filaminana ary tsy tokony hisy hampiahiahy na hanaovana resaka be fa efa fanao n’aiza n’aiza maneran-tany mandritra ny fivoriana iraisam-pirenena izany, hoy ny jeneraly Florens Rakotomahanina omaly raha nitafa tamin’ny mpanao gazety izy. Miara-mientana ny tafika, ny zandarimariam-pirenena sy ny polisim-pirenena ary efa tsara ambina ihany koa amin’izao fotoana ireo toerana hisian’ny fivoriana na fampirantiana na fampisehoana sy ny mety hipetrahan’ny vahiny mandritra io fivoriana io, hoy hatrany ny fanazavan’ny jeneraly Florens. Tokony hanaraka an-tsakany sy an-davany ny toromariky ny mpitandro ny filaminana ny rehetra ary tsy maintsy hisy ny fiovana na fanembantsembanana amin’ny fiainana andavanandro satria maro be ny fepetra tsy maintsy raisina eo amin’ny fifamoivoizana. Tsy antitra be izany fa mbola mahavita azy tsara ireo fitaovana eo am-pelatanan’ny mpitandro filaminana, hoy hatrany ity manamboninahitra jeneraly ity. Tsy tokony hampiahiahy ihany koa fa efa tsara lamina ny any amin’ny faritany ny amin’ny fitandroana ny filaminana sao misy mihevitra hoe lasa aty Antananarivo daholo ny zandary sy miaramila ka hanararaotra eo, hoy izy.